Archive du 15-sept-2021
Rivo Rakotovao “Miezaka mamafy lainga ny fitondrana”
Natsikafon’ny Filoham-panjakana teo aloha izay efa avy Filohan’ny Antenimierandoholona ary mpandrindra Nasionalin’ny Antoko HVM Atoa Rivo Rakotovao ny ambarany fa lainga sy fiezahan’ny mpitondra ankehitriny
Vao roa taona sy tapany amin’ny fe-potoana iasana dimy taona, dia tsy misy izay zava-dratsy tsy miseho. Tena tsy mbola nisy tao anatin’ny 60 taona tokoa ny ankamaroany.
Loza mahatsiravina teny Ampasapito Maty nodomin’ny fiara ilay polisy am-perin’asa
Polisy iray no namoy ny ainy teo am-panatanterahana ny asany teny amin’ny Rond Point Ampasapito omaly Talata, 14 septambra 2021 tokony tamin’ny 03 ora hariva.
Fa iza marina no ao ambadika ? Mivoaka ny tsiambaratelon’olona ambony maro
Taorian’ny raharaha Ambatobe nahavoatonona ny Minisitry ny serasera Rtoa Lalatiana Rakotondrazafy mivady sy ny mpanakanto malaza Mr Sayda,
Belelanda - Toliara Karan-doha 3 no nalain’ireo mpamaky fasana
Nitrangana vaky fasana tao amin'ny kaominina ambanivohitra Belelanda – Toliara Faritra Atsimo Andrefana ny alahady alina teo.
Sendikan’ny Polisy nasionaly Misy tsy ara-dalàna ny famindran-toerana ny polisy sasany
Mahazo vahana ny famindran-toerana ireo polisy eto an-drenivohitra sy ny any amin’ny faritra amin’izao. Misy tsy ara-dalàna anefa ny fanatanterahana izany hoy Randriamiarana Alphonse,
RMDM “Miantehitra amin’ny ramatahora sisa ny fitondrana”
Miharihary ny ramatahora nampanaovina ny mpitondra ary tena nisy fiantraikany tanteraka amin’ny toe-tsain’ny vahoaka, hita taratra tanteraka izany tany Antsirabe tamin’ny hetsika ny RMDM,
Naina Andriantsitohaina “Ho an’ny sosialy ny ampahany betsaka amin’ilay 80 miliara Ar ”
Naneho hevitra momba ny fitantanana an’Antananarivo ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina omaly taorian’ny fifanaovan-tsoniam-piaraha-miasa ara-kolontsaina teo amin’ny CUA sy ny Fondation Hy.
Fanamaivana ny mety hisiana fanonganana Mitarika any amin’ny Fanjakan’i Baroa
Lasa mitarika ny Fanjakana Rajoelina tsy hanan-tahotra sy vao mainka mampanaonao foana azy ireo ny fiheverana, fa tsy hisy ny fanonganam-panjakana hiseho satria efa fay sy nahazo lesona tamin’ny 2009
Madagasikara Feno 100 % avokoa ny fonja
Efa feno 100 % avokoa ireo fonja eto Madagasikara ankehitriny. Na ny toerana handrian’ny sasany aza mila tsy hisy intsony vokatry ny fahanterana sy ny fahateren’ny foto-drafitrasa
Antoko mpihira Taratry ny mazava Hanomana ny rakikira faha 6
Isaorana Andriamanitra fa tontosa ny fampisehoana rehetra natao tany an-tanindrazana ny faran’ny herinandro teo dia ny tao amin’ny FJKM Ambodanierana,